NavCoin စျေး - အွန်လိုင်း NAV ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NavCoin (NAV)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NavCoin (NAV) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NavCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $7 099 602.00
volume_24h_usd: $1 362 790.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NavCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NavCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NavCoinNAV သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.14NavCoinNAV သို့ ယူရိုEUR€0.119NavCoinNAV သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.107NavCoinNAV သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.128NavCoinNAV သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.27NavCoinNAV သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.887NavCoinNAV သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.13NavCoinNAV သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.526NavCoinNAV သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.188NavCoinNAV သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.196NavCoinNAV သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.14NavCoinNAV သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.09NavCoinNAV သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.76NavCoinNAV သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹10.53NavCoinNAV သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.23.57NavCoinNAV သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.193NavCoinNAV သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.213NavCoinNAV သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿4.38NavCoinNAV သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.978NavCoinNAV သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥14.87NavCoinNAV သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩167.07NavCoinNAV သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦53.21NavCoinNAV သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽10.34NavCoinNAV သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴3.88
NavCoinNAV သို့ BitcoinBTC0.00001 NavCoinNAV သို့ EthereumETH0.000371 NavCoinNAV သို့ LitecoinLTC0.00245 NavCoinNAV သို့ DigitalCashDASH0.00145 NavCoinNAV သို့ MoneroXMR0.0015 NavCoinNAV သို့ NxtNXT10.27 NavCoinNAV သို့ Ethereum ClassicETC0.02 NavCoinNAV သို့ DogecoinDOGE40.4 NavCoinNAV သို့ ZCashZEC0.00152 NavCoinNAV သို့ BitsharesBTS5.53 NavCoinNAV သို့ DigiByteDGB5.34 NavCoinNAV သို့ RippleXRP0.481 NavCoinNAV သို့ BitcoinDarkBTCD0.00482 NavCoinNAV သို့ PeerCoinPPC0.484 NavCoinNAV သို့ CraigsCoinCRAIG63.78 NavCoinNAV သို့ BitstakeXBS5.97 NavCoinNAV သို့ PayCoinXPY2.44 NavCoinNAV သို့ ProsperCoinPRC17.56 NavCoinNAV သို့ YbCoinYBC0.00008 NavCoinNAV သို့ DarkKushDANK44.89 NavCoinNAV သို့ GiveCoinGIVE302.97 NavCoinNAV သို့ KoboCoinKOBO32.59 NavCoinNAV သို့ DarkTokenDT0.129 NavCoinNAV သို့ CETUS CoinCETI403.97
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 20:40:02 +0000.